Live Casino ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ? - Myanmar Online Game
နည်းပညာတွေထွန်းကားတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကာစီနိုတွေဟာလည်း တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေနောက်အမှီလိုက်ရင်း Live Casino ဆိုတဲ့အရာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်မှာ Optical Character Recognition (OCR) ဆိုတဲ့နည်းပညာပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Live Casino တွေဟာ ကစားသမားတွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် စမတ်ဖုန်းတွေမှာပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေ ဆက်လက်တီထွင်လာကြပြီး ကာစီနိုရုံထဲက ကစားပွဲခုံပေါ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ အသေးစိတ်သိနိုင်တဲ့အထိ အဆင့်မြင့်လာပါတယ်။
Live Casino တွေရဲ့အဓိကအားသာချက်က ကာစီနိုရုံထဲထိသွားစရာမလိုပဲ ကာစီနိုရုံထဲက ဂိမ်းတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ နေရာမရွေးပဲ ကစားနိုင်တာပါ။ Liveကာစီနိုမှာ ဖဲဝေသူတွေ ဖဲကဒ်တွေကို အစစ်အမှန်အဖြစ်မြင်ရပြီး ကစားပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုလည်း အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသိရပါတယ်။ ကစားသမားတွေဟာ မိမိကစားချင်တဲ့စားပွဲကိုဝင်ပြီး ကစားရုံပါပဲ။ ဖဲဝေသူနဲ့ တစ်ကယ့်ဖဲချပ်တွေနဲ့ ကစားပွဲကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သိရှိနိုင်ပါတယ်။လောင်းကြေးထည့်ခြင်း၊ လျော်ကြေးငွေရခြင်းတို့ကိုလည်း ချက်ချင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် ကာစီနိုတစ်ခုထဲရောက်နေသလို ခံစားနိုင်တဲ့အတွက် ကာစီနိုကိုသွားဖို့ အဆင်မပြေတဲ့၊ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် အဆင်ပြေလှပါတယ်။
အဖြေကတော့မကွဲပြားပါဘူး၊ Liveကာစီနိုတွေဟာ ပြင်ပကာစီနိုတွေမှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေနဲ့ စည်းမျဉ်းချင်းအတူတူပါပဲ။ ဖဲကဒ်တွေကအစ အတူတူပဲ အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ခြားနားချက်မရှိပါဘူး။ Liveကာစီနိုဟာ ပြင်ပကာစီနိုများအတိုင်းပဲဖြစ်လို့ သင်သာအချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ကစားပွဲတွေမစခင် ဖဲမွှေတာကအစ ကြည့်ရှုလို့ရပါသေးတယ်။ ဖဲဝေသူတွေဟာလည်း သေချာလေ့ကျင့်ထားတဲ့လူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်ပကာစီနိုတွေနဲ့ ဘာမှမကွဲပြားပါဘူး။
ဒါကတော့ Casino အပေါ်မူတည်ကာ အချို့သောဂိမ်းများကလွဲပြီး ဂိမ်းတော်တော်များများကို ကစားလို့ရပါတယ်။ Liveကာစီနိုမှာ Roulette ၊ Baccarat ၊ Blackjack ဂိမ်းတွေဟာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ပြီး ကာစီနိုအကြီးအသေးအပေါ်မူတည်ကာ Hold`Em Poker ၊ Caribbean Stud Poker အထိ ကစားလို့ရပါသေးတယ်။ Slot ဂိမ်းတွေလည်း လောင်းကြေးငွေ အနည်းအများအလိုက် ဂိမ်းအမျိုးအစား များစွာရှိပါတယ်။
အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ် သင့်အနေနဲ့ ကာစီနိုရုံတစ်ခုဆီ ကားနဲ့သွား၊ ငွေလဲ၊ ကစားဝိုင်း လိုက်ရှာနေစရာမလိုပါဘူး။ အင်တာနက်ရှိတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ သင့်အိမ်ကကြိုက်တဲ့နေရာမှာ အင်တာနက်လေးဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့ ကစားဝိုင်းရှေ့ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အာရုံနောက်စရာလူတွေမရှိပါဘူး ပြင်ပကာစီရုံတွေအတွင်းမှာ ဆူညံပြီး အာရုံနောက်စရာလူတွေ ရှိတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ အာရုံကောင်းကောင်းစိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Liveကာစီနိုမှာတော့ သင်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ သင်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးဖွင့်ပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ကစားလို့ရပါတယ်။
ပြင်ပအနှောင့်အယှက်တွေမရှိပါဘူး သင့်ကို ဘာလုပ်ပါ၊ ညာလုပ်ပြောမယ့် ကစားသမားတွေ မရှိသလို သင်ကစားတာကို ထိုင်ကြည့်နေမယ့် လူတွေလည်းမရှိပါဘူး။
နေချင်သလိုနေ ဝတ်ချင်သလိုဝတ်လို့ရပါတယ် ပြင်ပကာစီနိုတွေကို သွားကစားမယ်ဆိုလျှင် သင့်အနေနဲ့ အနည်းဆုံးတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်သွားရပါလိမ့်မယ်။ Liveကာစီနိုမှာ ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်နေရင်းစွပ်ကျယ်၊ ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ပဲကစားချင်ကစား သင်ဆန္ဒရှိသလို ကစားလို့ရပါတယ်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါတယ် Liveကာစီနိုမှာ မိမိရဲ့ပိုက်ဆံ၊ ဂိမ်းရဲ့အချက်အလက်၊ လျော်ကြေးငွေ၊ ရလာဒ်စတာတွေကို ပြသပေးထားတဲ့အတွက် မိမိအနေနဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံးကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။
Live Casino တွေမှာကစားဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲ?
Liveကာစီနိုတစ်ခုမှာ ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံး မိမိကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဖွင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ငွေသွင်း၊ငွေထုတ် လုပ်ဖို့အတွက် ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဘဏ်အကောင့်နဲ့ Liveကာစီနိုမှအကောင့်ကို ချိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့ စတင်ကစားလို့ရပါပြီ။
Live Casino မှာအားနည်းချက်တွေရှိပါသလား?
ရှိပါတယ် ပထမဦးဆုံးအချက်မှာ မိမိကစားမယ့် ကာစီနို ရဲလုံခြုံစိတ်ချမှုပါ အင်တာနက်ပေါ်မှာ Liveကာစီနိုပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့အတွက် မိမိကစားမယ့်ကာစီနိုဟာ စိတ်ချရမှုရှိ၊မရှိ အရင်လေ့လာသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က စက်ကိရိယာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ပါ စက်ပစ္စည်းဆိုတာ ချို့ယွင်းချက်ရှိလို့ တစ်ခါတစ်ရံ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် မကောင်းရင်လည်း ကစားရတာမှာ အခက်အခဲရှိပါတယ်။
Liveကာစီနိုမှာ အခြားသောကစားသမားတွေကြောင့် ဂိမ်းတစ်ပွဲဟာ အချိန်ပိုကြာနိုင်ပါတယ် အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွက် စဉ်းစားဖို့ အချိန်ကန့်သက်ချက်တွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ အခြားသောကစားသမားတွေကို စောင့်ရတဲ့အတွက် ပျင်းရိလာနိုင်ပါတယ်။
အထက်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ အချိန်သက်သာခြင်း၊ မပင်ပန်းခြင်း စတဲ့အချက်တွေကြောင့် ခုအခါမှာ Liveကာစီနိုတွေဟာ အလွန်ရေပန်းစားလာသော်လည်း သမားရိုးကျနည်းဖြစ်တဲ့ ကာစီနိုထဲက စားပွဲမှာ ဖဲကိုင်ပြီးကစားချင်တဲ့ ကစားသမားတွေရှိနေဆဲပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်မှာပဲကစားနေပါစေ မိမိကစားမယ့် ကာစီနို အကြောင်းနဲ့ မိမိကစားမယ့် ဂိမ်းရဲ့အချက်အလက်တွေကို သေသေချာချာ သိရှိထားဖို့ကတော့ ကစားသမားတိုင်းအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။